သင်သည်သင်၏ဆရာတို့သည်လက်သငျသညျအခြို့သောအနေဖြင့်တစ်ဦးတန်းနှင့်သင်၏စမ်းသပ်သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်အပေါ်တစ်ဦး B ကိုမှတစ်ဦးကို C ကနေသင်တို့ကိုယူမယ့်, သင်ဖြစ်ကောင်းဘုန်းကြီးခံစားရပြန်စမ်းသပ်တာကိုလက်စသတ်နှင့်တော့ပြီးနောက်! သင်သည်သင်၏အစီရင်ခံစာကဒ်သို့သော်ပြန်ရ, သင်၏တန်းနေဆဲတကယ်တော့တစ်ဦးကို C ကြောင်းတွေ့ရှအခါ, သငျသညျပြဇာတ်အတွက်ချိန်ရမှတ်သို့မဟုတ်ချိန်တန်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးချိန်ရမှတ်ကဘာလဲ? ရှာကြစို့!
ဘာကိုဆိုလို "ဟု curve ပေါ်မှာဂမ်" ပါသလဲ?
ဆရာသင်လက်, ယခုနှစ်ရဲ့အစမှာဆိုပါစို့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ။ အဲဒါကိုတွင်သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်၏နောက်ဆုံးတန်းကဤထုံးစံ၌ဆုံးဖြတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းကရှင်းပြသည်:
သင့်ရဲ့ စာစီစာကုံး နှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိပိုပြီးအကြီးအကျယ်သင့်ရဲ့အိမ်စာထက်မာန်တင်း, သင်၏လယ်နှင့်သင့်အိမ်စာအပေါငျးတို့သအဖြစ်သင့်တန်း၏တူညီသောရာခိုင်နှုန်းများအတွက်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြေဆို count ကနှစ်ဦးစလုံး, ပေါင်းစပ်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများနှင့်စာစီစာကုံး, ဒါသူတို့အစမ်းသပ်မှု၏အသီးအသီးအခြားထက်ပိုအလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်နေကြ ပစ္စည်းများ။ သင့်ရဲ့ဆရာသူတို့အားစမ်းသပ်မှုသင့်ရဲ့တန်း၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်! သင်သည်သင်၏အိမ်စာ, စာစီစာကုံးနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ Ace ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့စမ်းသပ်မှုဗုံးကြဲလျှင်ထို့ကြောင့်, သင်၏နောက်ဆုံးရမှတ်နေဆဲမြောင်းအတွင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး, အင်းသူမ၏အိမ်စာ acing ခဲ့ပြီးသူမ၏ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများနှင့်စာစီစာကုံးအများစုအပေါ်တစ်ဦးရဲ့နှင့် B ရဲ့လာပြီ။ သူမအလွန်များကို ပြင်ဆင်. မရနှင့်ထိုကြောင့်အသူမ၏လယ်တန်းတစ် D ကိုခဲ့ပါတယ် မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှု သူမ၏ထွက်မထင်မှတ်သော။ အခုတော့အင်းသူမကသူမ၏နောက်ဆုံးချိန်ရမှတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦးပါဘူးရှငျ (80%) ရနိုင်ရန်အတွက်သူမ၏နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြေဆိုရရန်လိုအပ်နေပါသည်ဂိုးသွင်းသောအရာကိုသိရန်လိုသည်။
ယင်းသင်္ချာတွက်ခြင်းနှင့်အင်းကြောင်းထဲသို့သွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်လေ့လာနေအားထုတ်မှု၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုဆုံးဖြတ်ရန် နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြေဆို ကျနော်တို့က 3-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုလိုကျနာဖို့လိုတယ်:
စိတျထဲမှာအင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ရာခိုင်နှုန်း (80%) နဲ့ညီမျှခြင်းကို set up:
H ကို% * (H ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်) + Q% * (မေး၏ပျမ်းမျှ) + E ကို% * (E ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်) + M% * (M ကပျမ်းမျှအားဖြင့်) + F ကို% * (F ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်) = 80%
အိမ်စာ: ကဏ္ဍတန်း၏ 10% * 98% = (.10) (98) ။ = 0.098
ပဟေဠိ၏ပျမ်းမျှ: ကဏ္ဍတန်း၏ 20% * 84% = (.20) (84) ။ = 0.168
အက်ဆေးပျှမ်းမျှ: ကဏ္ဍတန်း၏ 20% * 91% = (.20) (91) ။ = 0.182
လယ်: ကဏ္ဍတန်း၏ 25% * 64% = (.25) (64) ။ = 0.16
ဗိုလ်လုပွဲ: အမျိုးအစား = (.25) တွင်တန်း * X ကို၏ 25% (x ကို) =?
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဖွင့်ထည့် x ကိုအဘို့အဖြေရှင်းပေး:
0,098 + 0,168 + 0,182 + 0,16 + .25x = .80
0.608 + .25x = .80
0,608 - .25x = .80
.25x = .192
x = .192 / .25
x = .768
x = 77%
အင်းရဲ့ဆရာချိန်ရမှတ်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုသောကြောင့်, သူမ၏ 80% သို့မဟုတ်သူမ၏နောက်ဆုံးတန်းများအတွက်ပါဘူးရှငျရဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်သူမ၏နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြေပေါ်မှာ 77% သို့မဟုတ်တစ်ဦးကို C ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏တန်းမှဆက်စပ်ဘာမှအကြောင်းကိုမသေချာသေးလျှင်, သင်၏ဆရာနှင့်အတူဆွေးနွေးချက်ကိုသွားပါ။ အတော်များများကပညာတတ်များပင်အတူတူပင်ကျောင်းတွင်အတွင်းကွဲပြားခြားနားတန်း,! သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ညာဘက်မထင်ပါဘူးဆိုရင်သင့်ရဲ့အဆင့်မှတဆင့်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းသွားကြဖို့ရက်ချိန်းတက်သတ်မှတ်မည်။ သင့်ရဲ့ဆရာသင်ထွက်ကိုကူညီဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်! သူသို့မဟုတ်သူမတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရမှတ်ရတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားသောသူတစ်ဦးကကျောင်းသားအမြဲကြိုဆိုသည်။
ဘယ်လိုနှစ်လ Away အနေနဲ့စာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်
ရမှတ် percentile နားလည်လုပ်နည်း
နားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက်2အဖြေများ Reading
နားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက်2Reading
အဆိုပါ Kinesthetic သင်ယူစတိုင်
ပင်မ Idea သင်ထောက်ကူနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုရှာပါ
တူညီသည့်အပင်မ Idea အမှားရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
10 အဖြေများ: နားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက် Reading
Fit ကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏ chi-Square ကိုကောငျးမွတျခွငျး
စာလုံးစောငျးထားသို့မဟုတ် Quotes အတွက်ခေါင်းစဉ်များ Punctuate မှလိုက်တဲ့အခါ
Audio အဘိဓါန် - ပြင်သစ်စကား, G, H ကို, ငါနှင့် J ကိုအတူစတင်ခြင်း
အဆိုပါ UNIVAC ကွန်ပျူတာများ၏သမိုင်း
အတိတျ / အငြိမ်းစားတိုက်လေယာဉ်၏လက်ဝှေ့သမား
Juan လူး Guerra ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 ဦးဆန့်ကျင်စစ်ပွဲ, Movies
အဆိုပါ Black ကပြည်တွင်းစစ်ခငြ့်အရေးလပ်ြရြားမြသို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်
Que alimento asegurar WIC မသန်စွမ်း ES, cómo solicitar y က efecto migratorio
ဖြောင့်ရေကူးကန် - တိုးတက်ကောင်းမွန်သော Play စသည်သိကောင်းစရာများ
အဆိုပါ Sagittarius က Man ၏နှလုံးအနိုင်ရ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ဗိုလ်မှူးကြီးဂရက်ဂိုရီ "Pappy" Boyington
ဥပုသ်နေ့၌ယရှေုသညျအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ, ဖာရိရှဲတို့ (မာကု 3: 1-6) ထိတိုင်ကြား
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း 10 ဆံပင်သတ္တုနှင့်သီချင်း
Enhanced ACT အရေးအသားစမ်းသပ်ခြင်း
အီတလီကြိယာ conjugation: Truccarsi